We Fight We Win. -- " More than Media ": အကယ်ဒမီ သတင်း
‎"Les Miserables." ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကား တွင် ဖန်တင်း အဖြစ် သရုပ် ဆောင်သည့် အန်း ဟာသာဝေ က အကောင်း ဆုံး ဇာတ် ပို့မင်း သမီး ဆု ရရှိသည်။
နာမည် ကျော် ပြင်သစ် စာရေး ဆရာ ဗစ်တာဟူးဂိုး၏ လာ မစ်ဆရဘ်(
ဒုက္ခဘုံ) ၀တ္ထု ကို ရုပ်ရှင် အဖြစ် ပြန်လည် ရိုက်ကူး ခြင်း ဖြစ်သည်။
၂၀၁၃ အော်စကာဆု အသံဖန်တီးမှု အကောင်းဆုံးဆု အဖြစ် Karen Baker Landers (ဘယ်) နဲ့ Per Hallberg တို့အား "Skyfall" ရုပ်ရှင်အသံဖန်တီးမှုဖြင့်ရရှိသွားပါတယ်။